China N'ogbe enginge akụkụ atụ ogho na mmanụ iyo 26300-02503 maka Hyundai ụgbọ ala factory na-emepụta | Chuangqi
N'ogbe enginge akụkụ atụ ogho na mmanụ iyo 26300-02503 maka Hyundai ụgbọ ala
Okwu nchara dị arọ na-eguzogide ntụgharị
O-mgbanaka emere tupu agbapụta mmanụ na-enye akara dị elu karịa nzacha ntanetị
Unique Torque stopa imewe na-egbochi ntapu si n'okpuru torquing
.Dị Mmanụ nzacha
Eriri eriri Ọkọlọtọ nha
Filtration arụmọrụ 99.7%
Agba Dị ka ndị ahịa chọrọ
Akụrụngwa Metal, 100% Myọcha Wood pulp Akwụkwọ
Asambodo ISO / TS16949
Ebe Mmalite China Mainland
Nọrọ na mmanụ na-ekpo ọkụ 135 ° C maka awa 198
Tụkwasịnụ Ikike 10000pcs / Izu
IHE Port Guangzhou / Ningbo / Shanghai / Qingdao
Kwụ Tergwọ Okwu TT, Westen Union, Moneygram, L / C, D / A, D / P / Alipay
Oge Mbuga ozi Ẹnam ekese n'ime 30 ụbọchị mgbe ugwo
Mbukota RAINBOW ika / Neutral / ngwaahia / Agba igbe
1.Plastic akpa + igbe + katọn;
2.Box/plastic akpa + katọn
Enyocha iji wepụta nchebe 5,000 nke nchekwa engine
96% Multi-Pass arụmọrụ na mwepụ nke ahụ dị ka obere ka 20 microns
Mgbapu mmiri mgbochi na ike ijigide elu iji nyere aka kpuchido injin ahụ n'oge mmalite
Igwe gasị nitrile na-enye akara na-agbanwe agbanwe iji gbochie nkwụsị
Enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ndị na - azụ ahịa mmanụ, ndị na - ere ahịa mmanụ na ndị na - enyocha ihe kacha mma e wuru n'ụkpụrụ akụrụngwa mbụ. Ngwurugwu nzacha nwere ezigbo ọrụ agba na nkwakọ ngwaahịa mara mma, mana ọ nwere ike ọ gaghịdị ezute akwụkwọ ikike chọrọ ndị nrụpụta. Conqi mbụ Oge Fit® mmanụ nzacha Njirimara a arọ-oru ígwè ikpe iguzogide distortion, sọrọ-oyi akwa filtration media maka kacha engine nchedo, a kpụrụ, tupu lubricated o-mgbanaka iji gbochie leakage, na a silicone mgbochi-drainback valvụ iji chebe engine ahụ na-ebibi ihe na-emebi emebi na mmalite mmalite. Dị ka ego agbakwunyere, Conqi nzacha na-ejikwa ihe ọhụụ ọhụụ Torque Stopper na-egbochi nhichapụ na ime ka nrụnye dị mfe, nnukwu atụmatụ maka ndị na-eme ya. Achịcha mmanụ mmanụ enweghị ọnụ ahịa. Conqi Oge izizi ihe eji ehicha mmanụ na - echedo ego gị bara uru.
N'ihe banyere nzacha mmanụ, ị nweghị ike ime karịa Conqi. Nke a bụ ihe mere anyị ji bụrụ otu n'ime ụwa Premiya OE mmanụ nyo suppliers. Anyị na-eji klaasị ụwa a mara etu esi arụpụta akara izizi mbụ anyị. N'ihi na a na-etinye nzacha mmanụ ọ bụla site na usoro nrụpụta na nnwale nke Conqi, ị ga-ejide n'aka na ọ na-agbaso ụkpụrụ dị elu anyị maka dabara adaba na arụmọrụ.
A-filter Mmanụ nza nwere ihe ndị dị mkpa maka akwụkwọ nza karịa nhazi ikuku, ọ bụ n'ihi na okpomọkụ nke mmanụ dịgasị na 0 ruo 300 degrees.
N'okpuru mgbanwe okpomọkụ dị nkọ, mkpokọta mmanụ na-agbanwekwa ya, nke ga-emetụta
nyo nyo nke mmanụ.
Mkpanaka akara mgbanaka
■ Elu àgwà mmanụ nyo akara mgbanaka ka nke pụrụ iche roba iji hụ 100% mmanụ leakage
■ Anyị na ngwaahịa na-eji elu àgwà mmanụ nyo nyo akwụkwọ, ọbụna n'okpuru kpam kpam okpomọkụ mgbanwe, kamakwa ike n'ụzọ dị irè iyo
adịghị ọcha, mgbe ị na-achọpụta na mmiri zuru ezu.
■ Mgbe okpomọkụ nke mpụga dara na uru ụfọdụ ma ọ bụ mgbe nchacha mmanụ gafere ọrụ ndụ nkịtị, valvụ ga-emepe ga-emeghe n'okpuru nrụgide pụrụ iche, na-ekwe ka mmanụ a na-asachapụghị abanye na injin ahụ. N'agbanyeghị nke a, adịghị ọcha dị na mmanụ ahụ ga-abanye njin ahụ ọnụ, mana mmebi ya pere mpe karịa mbibi nke mmanụ ọ bụla na injin ya adịghị.
Valve Odudu vave a bụ ihe dị mkpa iji chekwaa injin ya na mberede
Ndaghari iweghachi azụ
■ Ọ bụ naanị dị na elu àgwà mmanụ nzacha.
Ọ na - egbochi nchacha mmanụ ihicha mgbe njin ahụ kwụsịrị
Mgbe injinia na-achị ọzọ, ọ na - eweputa nsogbu were weta mmanụ were gbanye mmanụ injin.
1. Oru oma
na-echebe engines megide ihe mmetọ.
2. Silicon Mgbochi Drainback
na-egbochi ike ike ịmalite site na nsị mmanụ site na injinị mgbe ụgbọ agbanyụrụ.
3. Ogba mgbaaka emere tupu agbapụta
akàrà mma karịa gaskets ji ndị ọzọ ụdị.
Nke gara aga: Auto ụgbọ ala ikuku conditioner nọ n'ọrụ carbon HEPA ulo nyo maka ụgbọ ala ikuku iyo
Osote: Nchekwa onwe akụkụ Environmental Air Myọcha N'ihi Toyota OEM 17801-0M020
Nchekwa Mmanụ Auto
Mmanụ Myọcha mmewere
Oil Myọcha Factory
Mgbaze Mmanụ Maka Toyota
Mmanụ nzacha na China